» राज्यको संरक्षणमा हुर्किएको जातीय विभेदका लागि राज्यले दलितहरुसँग माफी माग्नुपर्छ
राज्यको संरक्षणमा हुर्किएको जातीय विभेदका लागि राज्यले दलितहरुसँग माफी माग्नुपर्छ
४ पुष २०७६, शुक्रबार ११:५४
जात व्यवस्था र आन्तरिक विभेद : किन बाहुनले बाहुनलाई र दलितले दलितलाई भेदभाव गर्छन् ? भन्ने प्रश्नबारे चर्चा गर्दा विषयको उठान सामान्य उदाहरणबाट गरौ । जस्तै; डोम समुदाय भन्नासाथ हाम्रो दिमागमा कस्तो मान्छेको चित्र आउँछ ? डोम समुदाय भन्नासाथ सानो झुपडीमा बस्ने फोहोर लुगा लगाएको, च्यातिएका पुराना थोत्रा लुगा लगाएको, फोहोरमा बङ्गुर चराएको प्रायः मानिसको आकृति याद आउँछ । राणा खलक भन्नासाथ ऐसआरामको जिन्दगी, ठूलो बङ्गालामा बस्ने मानिसको दिमागमा आकृति आउँछ । जात व्यवस्था र आन्तरिक विभेदको कुरा मलाई यहाँबाट शुरु गरौं जस्तो लाग्यो ।
अम्बेडकरले जात व्यवस्था भनेको केवल श्रम विभाजन मात्रै नभएर श्रमिकहरुको पनि विभाजन हो भनेका छन् । यो भनेको यसमा २ वटा कुरा आए : एउटा श्रम विभाजन, अर्को श्रमिकको विभाजन । अर्थात् जात व्यवस्था भनेको विभाजनको खेल रहेछ भन्ने कुरा बुझनुपर्यो । जातले जोड्ने होइन, तोड्ने काम गर्यो । दलितहरुको सन्दर्भमा वैचारिक रूपमा आहुति बलियो देखिन्छन् । उहाँका अनुसार, हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसार तोकिएको पेशागत नाम र तह नै जात हो । जुन वर्णमा जति धेरै पेशा छ, त्यति धेरै जात छ । जस्तै ब्राह्माण र क्षेत्री समुदायमा थोरै पेशाहरु छन्, त्यहाँ थोरै जात छन् । तर वैश्यमा धेरै जातहरु छन् । जस्तै वैश्यको पेशा कृषि, पशुपालन, व्यसाय भयो । त्यसैले त्यहाँ धेरै जातहरु छन् । शूद्रको पेशा उसको श्रम मात्रै गर्ने अर्थात् उसको. सम्पत्ति भन्नु नै श्रम हो । त्यसैले उसले जति पनि श्रम गर्छ, उसका पेशा भए । अर्थात् वर्णमा जति धेरै पेशा छ । त्यति धेरै जातहरु बने भन्ने कुरा भयो ।
ऋग्वेद लेख्दा छुवाछूत वा जातीय विभेद थिएन । तर वैदिक कालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा जातीय विभेद सुरु र छुवाछूत सुरु भयो । धर्मसूत्रहरु लेखिए । विक्रम पूर्व ६०० तिर त्यसले शूद्रलाई कजाउँदै लग्यो । त्यसपछि स्मृतिकाल सुरु भयो । स्मृतिकालमा पनि मनुस्मृतिकाल ईशापूर्वक २००–३०० को बीचमा लेखियो । त्यसमा शूद्रलाई एकदमै धेरै कजाइँयो ।
जात व्यवस्थाको सुरुवात खोतल्दा पहिला ऋग्वेदतिर पुग्छौँ । ऋग्वेद लगभग इसापूर्व १५ सयदेखि १ हजारको बीचमा रचना गरियो भनिन्छ । ऋग्वेदमा सर्वप्रथम वर्णको कुरा आयो । त्यसमा ४ वर्ण ब्राह्मण क्षत्री वैश्य र शूद्र भनियो । ऋग्वेद लेख्दा छुवाछूत वा जातीय विभेद थिएन । तर वैदिक कालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा जातीय विभेद सुरु र छुवाछूत सुरु भयो । धर्मसूत्रहरु लेखिए । विक्रम पूर्व ६०० तिर त्यसले शूद्रलाई कजाउँदै लग्यो । त्यसपछि स्मृतिकाल सुरु भयो । स्मृतिकालमा पनि मनुस्मृतिकाल ईशापूर्वक २००–३०० को बीचमा लेखियो । त्यसमा शूद्रलाई एकदमै धेरै कजाइँयो । शूद्रले पढ्न लेख्न नहुने, सम्पत्ति जोड्न पनि नहुने । ऊ चाहिँ पूर्व जन्मको कारणले यो जुनीमा शूद्र भयो । यो जन्ममा ब्राह्मणको सेवा गरे अर्को जुनीमा एकदम उच्च कुलमा जन्मन्छ भनेर उसलाई विश्वास दिलाइयो । यो दक्षिण एसियाको जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था र जातमा कसरी परिर्वन हुँदै गयो भन्ने कुरा हो । सुरुमा वर्ण थियो । पछि जातमा परिणत भयो ।
नेपालमा चाहिँ त्यसले प्रवेश गरेको लिच्छवि कालमा भनिन्छ । अर्थात् सन् २०० देखि भयो । त्योभन्दा अगाडि किराँत कालमा थिएन भनिन्छ । त्यही आसपास लिच्छवि कालको शुरुवाततिर पनि नेपालमा जात व्यवस्था सुरुवात भएको मानिन्छ । जस्तै कपिलवस्तुमा गौतम बुद्धले २५०० वर्ष अगाडि नै जातपातविरोधी विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका थिए । उनको अभियान नै जातपात विरोधी थियो । त्यसैले लिच्छवि कालभन्दा अगाडि नेपालमा जातपातको सुरुवात भएको मानिन्छ ।
अब आन्तरिक विभेदको कुरा गर्दा जातको तहगत संरचनामा जाँदा सुरुमा ४ वटा वर्ण ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र थिए । मनु स्मृतिले त्यही पदचाप पछ्यायो । झण्डै १७ सय वर्षपछाडि मानव न्यायशास्त्र लेखियो । त्यो जयस्थिति मल्लले लेखे । त्यसमा अर्थात् वि.सं. १४३६ मा पनि मनुस्मृतिको ४ वटा वर्ण नै लागू भयो । मानव न्यायशास्त्रमा लेखिएको ४ सय ७४ वर्षपछि १९१० मा मुलुकी ऐन लेखियो । त्यसबेला ४ वटा वर्णलाई तोडियो र ५ वटा वर्ण बनाइयो । जातीय विभाजन ५ किसिमको बनायो । सबैभन्दा माथि तागाधारी, दोस्रो नमासिन्या मतवाली, यो भनेको कमारो बनाउन नमिल्ने दास बनाउन मिलेन, किनबेच गर्न नमिल्ने वर्ग पर्यो । तेस्रो किनबेच गर्न मिल्ने, दास बनाउन मिल्ने मासिन्या मतवाली भयो । चौथो पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्न नपन्र्या भनेको पानी चलेन, छुँदाखेरि सुनपानी आदि छर्कनुपर्ने भएन । पाचौँ पानी पनि नचल्ने छोइहाल्यो भने सुनपानीको छिटो हाल्नु पर्ने भनेर वर्गीकरण गरिएको छ ।
तागाधारीमा उपाध्याय, बाहुन, राजपुत, जैसी बाहुन, तल्लो जैसी, क्षेत्री, देवाजु (नेवार बाहुन), मधेसी बाहुन, संन्यासी विभिन्न नेवार जात भनेर तागाधारीमा वर्गीकरण गरिएको छ । नमासिन्या मतवाली भनेर मगर, गुरुङ, केही नेवार जात, जसलाई किनबेच गर्न, दास बनाउन पाइँदैन भनिएको छ । मासिन्या मतवालीमा कमारो बनाउन मिल्ने, चेपाङ, कुमाल, हायु, थारु तामाङ आदि राखिए ।
त्यसैले हामीले गुरुङ, मगर, चेपाङ, हायुहरुको सामाजिक स्तरीकरण हेर्‍यौँ भने धेरै तलमाथि छ । यो मुलुकी ऐन १९१० को देन हो । छिटो हाल्न नपर्ने तर पानी नचल्नेमा कसाई, कुसुन्डे, हिन्दु धोबी, मुसलमान (म्लेच्छ) आदि । तर छिटो हाल्नुपर्ने छुँदा छुन नहुनेमा कामी, सार्की, दमाई, गडारा, वादी, गाइने, पोडे, च्यामे आदि ।
यो मुलुकी ऐनले सिर्जना तहगत संरचना भयो । तर आन्तरिक विभेद पनि तलदेखि माथिसम्म तहगत विभाजनमा तागाधारीले यहाँ पानी नचल्ने छोइछिटो नहाल्नु, छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातलाई विभेद गर्ने त गर्ने नै भयो । त्यहीँभित्र तागाधारीमा पनि विभेद र मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवालीभित्र र छिटो हाल्नुपर्ने भित्र पनि अचक्काली विभेद छ । यसलाई मैले आन्तरिक विभेद भनेको छु । यो आन्तरिक विभेद भनेको छुट्टै होइन तर जातीय विभेदकै वृक्षमा हुर्किएको मूल जातीय विभेदभित्रै एउटा ऐंजेरु हो । यो ऐंजेरुलाई पनि शासक समुदायले पाल्ने, पोस्ने, फलाउने काम काम गर्यो । त्यसको कारण भनेको खासगरी आफ्नो सत्तालाई सुरक्षाका लागि हो भन्ने कुरा त जगजाहेर नै छ ।
आन्तरिक विभेद पनि तलदेखि माथिसम्म तहगत विभाजनमा तागाधारीले यहाँ पानी नचल्ने छोइछिटो नहाल्नु, छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातलाई विभेद गर्ने त गर्ने नै भयो । त्यहीँभित्र तागाधारीमा पनि विभेद र मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवालीभित्र र छिटो हाल्नुपर्ने भित्र पनि अचक्काली विभेद छ । यसलाई मैले आन्तरिक विभेद भनेको छु ।
यो आन्तरिक विभेद कस्तो छ भन्ने कुरा बताउन अघिका तहगत संरचनाबाट जान्छु । पहिला बाहुन बाहुन बीचमा, क्षत्री क्षत्रीबीचमा, जनजाति जनजातिबीच र दलित दलित बीचमा विभेद कस्तो छ ? छोटकरीमा हेरौं ।
पहिला बाहुन बाहुन बीचमा रहेको विभेदको कुरा गरौँ । पहिला बाहुनहरुले नै शास्त्र लेखे । धर्मको व्याख्याता उनीहरु नै भए । स्वाभाविक रूपमा जसले लेख्छ, उसले आफूलाई माथि राख्ने नै भए । त्यहाँभित्र पनि म चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हुँ भन्ने दावी गर्दै ४, ५ जनामध्येमा एक जनाले नेतृत्व लिन झगडा हुन्छ । एउटा खास वर्गले म चाहिँ नेतृत्व लिने हँु भन्ने बनाउने छ होला । त्यही झगडा हो । बाहुनका प्रकार हेर्दा पनि शाश्वत, कान्याकुब्ज, गौर, मैथिल र उत्कल भनेर ५ किसिमका हुन्छन् ।
अब त्यो ५ किसिमका बाहुनमा पनि कान्याकुब्ज ब्राह्मणले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ बाहुन दावी गर्छ । उसले म पूजापाठ गराउने र व्याख्याता हुँ भन्छ । अनि नेपालको पहाडी भेगको सन्दर्भमा कान्यकुब्जको कुरा गर्दा दुई किसिमका छन् : पूर्वीया र कुमाई । मधेसमा पर्साको शुक्ला, दुवे, चैबेहरु कान्यकुब्ज ब्राह्मण भए । अनि पर्वते बाहुनको कुरा गर्दा उपाध्याय र जैसी दुई किसिमको भए । उपाध्याय बाहुन धर्मको व्याख्याता भए । जैसी बाहुन चिना हेर्ने ज्योतिषको काम गर्ने भए । उपाध्यायले आफूलाई २४ क्यारेटको बाहुन ठान्ने भयो । ऊ अरूलाई २०, २२, १८ क्यारेटको ठान्ने भयो । पहाडका साथीसँग यसो कुराकानी गर्दा हामीलाई त जैसी भनेर खुब हेप्छन् भनेर भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । कतिपय चाहिँ विवाह गरेर घर ल्याउँदा जैसी भनेर उपाध्याय भनेर घरभित्र नभित्र्याएको घटनाहरु छन् ।
यस विभेदको उत्पत्तिको जरो हेर्दा अगडि धेरै देख्दिनँ । जयस्थिति मल्लको सुधारमा उपाध्याय बाहुन, जैसी बाहुन बीचको विभेद अलि प्रष्टसँग देखियो । जयस्थिति मल्लको सुधारमा के भन्छ भने जैसी जातलेआफूले गर्न हुने कर्मबाहेक बल मिच्याइँ गरी उपल्ला जातले गर्ने कर्म गरे त्यस जैसीको जनै छिनाई श्रेष्ठ जातमा मिलाइ दिई तु २४ दण्ड गर्नु भन्छ । त्यो भनेको उपाध्यायको काम गर्लास्, खबरदार भनेको हो । किनभने जयस्थिति मल्लले फलननाले यो पेशा गर्नु, फलान भनेको यस्तो जात हो, फलानाले छोएको फलनाले नखानु भनेर त्यहाँ सबै प्रष्ट थिति बाँधेका छन् ।
त्यहाँ बाहुन बाहुन बीचको विभेद पनि आउने भयो । त्यो कुरा अलिकति सल्कँदै मुलुकी ऐन १९१० सम्म पनि आएको छ । त्यसले पनि फेरि जैसी बाहुन र उपाध्यायबीच कडा विभेद गर्छ । त्यसले के भन्छ भने जैसी बाहुनले उपाध्याय र आफूभन्दा ठूला जातलाई दहीचिउरा मुछाएर ख्वाया छ भनिया खुवाउन्यालाई २० रुपियाँ, जानी जानी खान्यालाई १० रुपियाँ दण्ड गरी पत्या गराइदिनू । खानेलाई पनि सुख छैन, ख्वाउनेलाई पनि सुख छैन । अनि विभेद गर्दिनँ भन्न पनि पाइएन, गर्नैपर्यो । विभेदन नगरेको रहेछ भने पत्या गर्नुपर्यो । धर्म अधिकारीले पत्या गर्ने गर्थे । धर्म अधिकारीको धर्मलाई कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने र धर्ममा कहीँकतै दखल भयो भने शुद्धीकरण गराउने थियो । तिनीहरुलाई राज्यले नै नियुक्ति गरेको हुन्थ्यो । यो मुलुकी ऐनको कुरा भयो ।
मधेसी बाहुन भनेर त्यहाँनेर भारतीय बाहुन भनेर लेखेको छ । नेपाली ठानेकै छैन । मधेसी बाहुनलाई तागाधारीमा राख्यो मुलुकी ऐनले तर के हो भनेर त्यसको विस्तृत व्याख्या गरेका छैन । व्यवहारमा मधेसमा मैथिली बाहुन र कान्याकुब्ज ब्राह्मणबीच विभेद छ ।
मधेसी बाहुन भनेर त्यहाँनेर भारतीय बाहुन भनेर लेखेको छ । नेपाली ठानेकै छैन । मधेसी बाहुनलाई तागाधारीमा राख्यो मुलुकी ऐनले तर के हो भनेर त्यसको विस्तृत व्याख्या गरेका छैन । व्यवहारमा मधेसमा मैथिली बाहुन र कान्याकुब्ज ब्राह्मणबीच विभेद छ । मैथिली, बाहुन भनेका झा, ठाकुर, चौधरी, मिथिला क्षेत्रका हुन् । यता कान्याकुब्ज भनेका मिश्रा, पाण्डे, दुवे, चैबे आदि हुन् । उनीहरुबीच पर्सादेखि यता र उताकाको विवाहवारी चल्दैन, विभेद छ ।
तराईका बाहुनको कुरा गर्ने हो भने भूमिहार भन्ने आफूलाई बाहुनवादी ठान्छ । तर अरू बाहुनले २४ क्यारेटको बाहुन नठान्ने अवस्था छ । त्यसैले विवाहवारी चल्दैन । यो भनेको आन्तरिक रूपमै विभेदको अवस्था छ ।
समग्रमा भन्दा उपाध्याय बाहुन, जैसी बाहुन र नेवार बाहुन, मधेसी बाहुन बीच बिहेवारी चल्दैन भेदभाव छ तर एकदमै उग्र छुवाछूत छैन । विभेद चाहिँ छ ।
क्षेत्री क्षेत्रीबीचको विभेद बाहुन वा दलितभित्रको जस्तो कडा छैन । त्यहाँ ठकुरी, राजपूतहरुले आफूलाई अलिकति ठूलो खालको क्षेत्री ठान्ने, ब्राह्मणले वैश्यसँग विवाह गर्यो भने अल्लि कमसल क्षेत्री भयो । क्षेत्रीले पानीचल्ने शूद्रसँग विवाह गरेको छ भने वैश्यमा झर्ने र पानी नचल्ने शूद्र हो भने त दलित जातमा झार्दिहाल्ने । जात झर्ने पनि अचम्मको व्यवस्था छ । तर त्यहाँ छुवाछूत हुनेखालको विभेद छैन ।
क्षेत्री क्षेत्रीबीचको विभेद बाहुन वा दलितभित्रको जस्तो कडा छैन । त्यहाँ ठकुरी, राजपूतहरुले आफूलाई अलिकति ठूलो खालको क्षेत्री ठान्ने, ब्राह्मणले वैश्यसँग विवाह गर्यो भने अल्लि कमसल क्षेत्री भयो । क्षेत्रीले पानीचल्ने शूद्रसँग विवाह गरेको छ भने वैश्यमा झर्ने र पानी नचल्ने शूद्र हो भने त दलित जातमा झार्दिहाल्ने । जात झर्ने पनि अचम्मको व्यवस्था छ ।
जनजातिभित्रको विभेदको कुरा गर्दा अलि बढी नेवार समुदायमा छन् । नेवार समुदायले आफूलाई आदिवासी जनजाति सूचीकृत गरेको हुनाले त्यहाँ अलिबढी देख्न सकिन्छ । नेवार समुदायभित्र संस्कृतिले एउटै मालाभित्र गाँसियो । त्यहाँभित्र पनि नेवार समुदायभित्र सिङ्गै एउटा विविधता छ । त्यहाँभित्र एउटा जातको अर्को जातसँग विवाह हुँदैन । छुवाछूत व्यापक छ ।
यसको कारण भनेको जयस्थिति मल्लकै १४३६ तिर फर्कंनुपर्छ । उनले गरेको सुधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ७ सय २५ वटा जात बनाएका छन् । ती प्रत्येक जातको पेशा तोकिएको छ । प्रत्येक जातले के गर्न हुने, के गर्न नहुने ? कसले छोएको कसले खान नहुने ? कसले खाएमा के सजाए हुने भन्ने धरि व्यवस्था छ । जातअनुसारको रहनसहन लुगाफाटो, घर कस्तो हुने, गरगहना लगाउन पाउने कि नपाउने सबै छ ।
उदाहरणका लागि, पोडे जातले गर्ने कामको व्यवस्थामा के छ भने आफ्ना जातको हातबाटै कपाल खौरनु, नङ काट्नु, पोसाक जोडी नलगाउनु, सुनका गहना नलगाउनु, बिना कामले सूर्यनारायण अस्ताएपछि सहरभित्र नपस्नु भन्ने छ । भनेपछि सहरबाहिर मात्रै उनीहरुलाई बसाइन्थ्यो, सहरभित्र बस्न पाइँदैनथ्यो । इस्मसानमा बस्नु पर्ने अवस्था थियो । यसरी प्रत्येक जातको कार्यको विभाजन थियो । अन्तर जातीय विवाहलाई पनि बन्देज लगाइएको छ ।
दलितमा पनि विभेद छ
दलितको विभेद कसरी सुरुवात भयो भन्ने सन्दर्भमा दलित भनेको शूद्र भए, शूद्र भनेको सेवा गर्ने भनिएको हो । शूद्र (सेवा गर्ने मान्छे) लाई धेरै फुटायो, धेरै टुक्रा पर्‍यो भने एकीकृत विद्रोह त आउन सक्ने भएन । यसको एकीकृत विद्रोह तोड्नलाई पुराणकालदेखि नै यसको प्रपञ्च सुरु भएको छ । पुराण भनेको धेरै प्राचीन हो । विष्णु पुराणले के भन्छ भने जुन शूद्रले आफ्नो प्राण धन तथा स्वास्नीलाई ब्राह्मणको सेवामा अर्पण गर्छन् त्यस्ता शूद्रको अन्न र तिनले छोएको खान हुन्छ । अरू शूद्रको अन्न र उनले छोएको खान हुँदैन भन्ने पाइन्छ । ब्राह्मणलाई जसले सेवा गर्न सक्छ, श्रीमती समेत दिएर जसले सेवा गर्न सक्छ, उसले छोएको खान भयो । अरुको भएन ।
शूद्र (सेवा गर्ने मान्छे) लाई धेरै फुटायो,धेरै टुक्रा पर्‍योभने एकीकृत विद्रोह त आउन सक्ने भएन । यसको एकीकृत विद्रोह तोड्नलाई पुराणकालदेखि नै यसको प्रपञ्च सुरु भएको छ ।
उसले त्यहाँ दुई किसिमका शूद्र बनाइसक्यो । छोएका खान हुने शूद्र, छोएको खान नहुने शूद्र । तिनीहरु बीचमा पनि एकअर्का बनाइदिएपछि बन्नेहरु बीचमा आपसी केही हुन्छ होला, मतभेद अथवा उनीहरुबीचको अन्तक्र्रियामा पनि फरक आउने भयो । स्मृति ग्रन्थहरुले आर्य मालिकहरुमा बसेर काम गर्ने शूद्र छुत शूद्र भए । श्मसानमा बस्ने भनेको अलग्गै बस्ने दुई किसिमका भए । त्यो स्मृति ग्रन्थले बनाए । उनीहरु बीचमा एकअर्कामा अन्तत्र्रिmया नभएपछि उनीहरु बीचको दूरी बढ्दै गयो ।
मुलुकी ऐनले प्रष्टसँग लेखेरै, कानून बनाएरै के भन्यो भने अहिलेका दलितहरु सातवटा उल्लेख छ । एउटा कडरा भन्ने दलित पनि छ । त्यसैले गर्दा त्यहाँ ८ दलित थरीका दलित भए । त्यहाँ मधेसी दलितको कुरा उल्लेख गरेको छैन । मधेसी दलितलाई फेरि उसले नेपाली नठानेको हुन सक्छ । त्यसैले पहाडका ७ वटा दलितको सन्दर्भमा सबैभन्दा तल्लो तहमा उसले च्यामे खलकलाई राख्छन् ।
उसले के भन्छ भने उपल्ला तकदेखि कोलियातकको जुठो खान्याले सबैभन्दा सानो च्यामे खलकको जात हो । यहाँ जुठो खाने भनिएको छ । जुठो खाने अवस्था किन आयो भने उनीहरुको अवस्था त्यहाँबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । दलितलाई जमिन छैन । सम्पत्ति जोड्ने अधिकार छैन । पढ्ने अधिकार छैन । खेती गर्न सक्दैन । केही पनि गर्न नक्ने भएपछि त मागेर खानु पर्यो । मागेर खानेलाई त कसैले पकाएर दिने भएन । उब्रेको दिने हो । उब्रेको पनि जुठो दिने हो । भनेपछि त्यो बेला सबैको जुठो खानेको अवस्था सिर्जना गरियो । त्यसैले सबैको जुठो खाने सबैभन्दा सानो च्यामे खलकको जात भन्छ । च्याम खलकको जुठो नखाने तर अरूको जुठो खाने भएकोले च्याम खलकको भन्दा ठूलो पोडेको जात भनेर मुलुकी ऐनले भन्यो ।
यहाँ जुठो खाने भनिएको छ । जुठो खाने अवस्था किन आयो भने उनीहरुको अवस्था त्यहाँबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । दलितलाई जमिन छैन । सम्पत्ति जोड्ने अधिकार छैन । पढ्ने अधिकार छैन । खेती गर्न सक्दैन । केही पनि गर्न नक्ने भएपछि त मागेर खानु पर्यो । मागेर खानेलाई त कसैले पकाएर दिने भएन । उब्रेको दिने हो । उब्रेको पनि जुठो दिने हो । भनेपछि त्यो बेला सबैको जुठो खानेको अवस्था सिर्जना गरियो
च्याम खलक र कोलियाको हातको नखान्या । छिटो हाल्न नपन्र्या जातसम्मको घर गई नाची मागिया खानी हुनाले ती दुई जातभन्दा ठूलो बादीको जात भनियो । यसरी तहगत श्रेणी बनाउँदै गएको छ । बादीको हातको नखान्या गाइ बजाइ मागी खानिया हुनाले बादीभन्दा ठूलो गाइने जात। यसरी टुक्र्याइँदै गयो । गाइनेभन्दा ठूलो दमाइको जात भन्यो । दमाइभन्दा ठूलो कडाराको जात भन्यो । कडारा जात भनेको कस्तो जात भने सार्कीले कामीलाई विवाह गर्यो भने कडारा जात बन्छ । पहिला हजुरबुवाले कडारा भनेको सुन्थेँ । अहिले कडारा भन्ने रहेन कि कामी रह्यो कि सार्की रह्यो । त्यसैले अब कडाराभन्दा पनि ठूलो सार्की र कामीको जात भनेर मुलुकी ऐनले भन्यो । कामी र सार्कीलाई को भन्दा को ठूलो भनेनन्, दुवै समान हो भन्यो ।
पूर्वतिर सार्की मर्यो भने पनि कामीले काँधमा बोकेर लाने चलन छ । एउटा जातले अर्को जातले काँधमा बोक्ने चलन हुन्न तर त्यहाँ चलेको छ । त्यो सम्भवतः मुलुकी ऐनको देन भन्नुपर्छ । यसले के भन्छ, भने तिमीहरु दलित हौँ । तिमीहरु सारा जात भनिएका पनि तिमीले अर्को जातलाई विवाह ग¥यौँ भने तिमी तल्लो जातमा फस्छौ हौ भनेर भन्छ । अनि विवाह गर्यौ भने ५ रुपियाँ दण्ड गर्ने पनि भन्छ । विभेद गर्नुपर्छ, खबरदार गरेनौँ भने सजाय हुन्छ । त्यो बाहुनको हकमा पनि भन्छ दलितको हकमा पनि भन्छ । सबैको हकमा भन्छ । यो आन्तरिक विभेद किन गरियो भन्ने कुरा फुटाउनलाई नै हो ।
आन्तरिक विभेद अहिले पनि किन हटेन ? अहिले त हामी पढेखेलेका शिक्षित भयौँ । जान्ने बुझ्ने भयौँ । तर पनि आन्तरिक विभेद हटेन । पहिलेको जस्तो कडा भएन । तर विवाह नै गर्न गयो भने पनि उपाध्याय र जैसीको कुरा आउने भयो । कामीले विवाह गर्नुपर्‍यो भने गाइने वा बादी विवाह गर्न गर्छु भनेर सिधै जाने अवस्था छैन । त्यही पनि पढेलेखेको अवस्थामा किन भएन भन्दा जात व्यवस्थालाई सर्वस्वीकार्य बनाइयो । हरेकको पछाडि अर्को सानो जात खडा गरियो । क्षत्री छ भने म बाहुनभन्दा पो सानोे हो त अरू भन्दा त ठूलो हुँ नि । म कामी हो भने उताभन्दा पो सानो हो त । बादी, गाइनेभन्दा त ठूलो हुँ नि भनेर त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाइयो ।
अहिले त हामी पढेखेलेका शिक्षित भयौँ । जान्ने बुझ्ने भयौँ । तर पनि आन्तरिक विभेद हटेन । पहिलेको जस्तो कडा भएन । तर विवाह नै गर्न गयो भने पनि उपाध्याय र जैसीको कुरा आउने भयो । कामीले विवाह गर्नुपर्‍यो भने गाइने वा बादी विवाह गर्न गर्छु भनेर सिधै जाने अवस्था छैन । त्यही पनि पढेलेखेको अवस्थामा किन भएन भन्दा जात व्यवस्थालाई सर्वस्वीकार्य बनाइयो ।
फेरि त्यो तोड्ने काम गर्‍यो भने त पहिला सजाय हुने थियो । तर अहिले नभए पनि सर्वस्वीकार्यको अवस्था अहिले पनि रहिरहेकै छ । बाहुन र क्षत्रीभित्र यो छ तर उनीहरुले किन बोलेनन् ? दलितहरुले पनि त्यति बोलेको देखिँदैन । अब बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । बाहुन क्षत्री नबोल्नुको कारण त खास उनीहरुलाई हानि पनि भएन । दलितलाई जस्तो धेरै पिरेको पनि छैन । त्यो नै एउटा कारण हो । रहे पनि ठीकै छ, नरहे पनि ठीकै छ भने जस्तो । यहाँ मैले धेरै शिक्षित नेतृत्व गरिरहेका अधिकारकर्मीहरुको बाहेकको कुरा गर्दै छु ।
ज्ञान आर्जन गर्न दलितलाई वञ्चित गरियो । त्यसले हामीमाथि कपटपूर्ण तरिकाले यो आन्तरिक विभेद लादिएको हो, यो छल हो, कपट हो भन्ने कुरा दलितले बुझ्न सकेन । त्यसले गर्दा त्यो विभेद विद्यमान छ । योभन्दा अघिको कर्मको फल हामीले भोगिरहेका छौँ भन्ने कुरा गर्छन् । जयस्थिति मल्लका कारण र मूलुकी ऐनको प्रभावको अवशेष रहिरह्यो । यो जातीय विभेद विरुद्धका जतिपनि ऐन कानूनहरु छन्, त्यसले गर्दा कार्यान्वयन भएनन् ।
राज्यले अब के गर्ने ?
कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्र्छ, चाहे दलितले दलितलाई गरोस या उपाध्यायले जैसीलाई गरोस्, जसले जसलाई विभेद गरोस्, त्यस विरुद्धका कानुन कडाइका साथ पालना गर्नुपर्यो । अनि उत्पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो । अन्तरजातीय विवाहलाई पुरस्कृत गर्नुपर्यो । केही समयअघिसम्म पैसा दिने भन्ने कुरा आएको थियो । केहीले पाए पनि केहीले पाएनन्, पछि बन्द भयो । राज्यले नै जात व्यवस्था भनेको राज्यसँग, राज्य संरक्षित व्यवस्था हो । त्यसैले यो अजर अमर भएर अहिलेसम्म बसिराखेको छ । त्यसैले यसलाई हटाउनु पर्यो । हटाउनका लागि जति पनि उत्पीडनमा परेका छन्, तिनीहरुसँग राज्यले माफी माग्नुपर्यो । जसरी अबजिन्स आदिवासीसँग अस्टे«लिया सरकारले मे २६ लाई माफी दिवस भनेर हरेक वर्ष मनाउँछ त्यसरी नै दलितहरुसँग राज्यले माफी माग्नुप¥यो । माफी दिवसको सुरुवात गर्नुपर्यो । यसबाहेक पनि गर्नुपर्ने अरु धेरै कुराहरु छन् ।
मङ्सिर २६ गते बिहीबार ‘जात व्यवस्था र आन्तरिक विभेद : किन बाहुनले बाहुनलाई र दलितले दलितलाई भेदभाव गर्छन् ?’ भन्ने शीर्षकमा मार्टिन चौतारीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पत्रकार तथा ‘आन्तरिक विभेदको वृतान्त’ का लेखक मेघराज रसाइलीले व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित उतार ।
प्रस्तुतिः माया श्रेष्ठ
धर्मावलम्बीहरूबाट समेत विभेद भोगेँ
वनजंगलको धनी देशमा तथ्यांक अनुसार नेपालमा दैनिक डेढ करोडको काठ आयात हुदै
प्रशासकीय न्यायका सारथी